व्यवसायीको आक्रोशः व्यापार गर्न नदिने, कर तिर्न ताकेता गर्ने ? – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/व्यवसायीको आक्रोशः व्यापार गर्न नदिने, कर तिर्न ताकेता गर्ने ?
२० जेठ, काठमाडौं । सरकारबाट घोषित लकडाउनको अनुशासनपूर्वक पालना गरिरहेका जनताको अब भने धैर्यको बाँध टुट्न थालेको छ । दैनिक काम गरेर जीवन धान्नुपर्नेहरु असैह्य भएर लकडाउन खुकुलो गर्न माग गर्दै सडकमा निस्किन थालेका छन् ।
बौद्धका व्यापारीहरुले पसल खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै मंगलबार प्रदर्शन गरे । अन्य व्यापारीहरुले पनि आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । सरकारले समयमा नै कर तिर्न ताकेता गरिसकेको तर व्यापार गर्न भने नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सरकारले तत्कालै पसल खोल्ने वातावरण नबनाए चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
वार्ता र संवादको माध्यमबाट व्यवसायीहरुको समस्या समाधान सरकारले गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले माग पुरा नगरेमा व्यवसायीहरु तालाचावी लिएर सडकमा उत्रिन तयारी अवस्थामा रहेको उनले चेतावनी दिए ।
सरकारले बजेटमा व्यवसायीहरुका लागि केही सहुलियत प्याकेज ल्याउने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो पुरा नभएको उनको भनाइ छ । बजेटले उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत हुने किसिमको कार्यक्रमहरु ल्याएको भए धेरै तनाब नहुने कटवाल ताउँछन् ।
अन्य देशहरुमा पनि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएर लकडाउन खोलिएको भन्दै नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्नु पर्ने उनले बताए । सरकारले अझै लामो समय पसल सञ्चालन गर्न नदिने भए राज्यले घरभाडा र बैंकको ब्याज तिरिदिनु पर्ने उनले माग गरे ।
व्यवसायीहरुका विभिन्न संघ, संगठनहरुले पनि पसल सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने आवाज उठाएका छन् । बौद्ध व्यापार संघ, नेपाल व्यापार संघ, बानेश्वर व्यवसायी संघ, कोटेश्वर व्यवसायी संघ, खिचा पोखरी व्यापार संघ लगायतका आधा दर्जन बढी संघ संगठनहरुले पसल सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
‘हामी हावाको भरमा होइन, आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्छौ, सरकारले यसका लागि वातावरण मिलाइदिनु पर्यो’ संघका अध्यक्ष थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यहि बन्दाबन्दीको अवस्था हो भने त भोकै मर्ने चिन्ता भइसक्यो ।’
नेपाल व्यापार संघका महासचिव बैकुण्ठ दाहालले पनि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकिदिएर पसल खुलाउन दिनु पर्ने बताए । सँधै बन्दाबन्दी हुँदा राज्यले समेत ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
परी तामाङको ३ मिनेट ७ सेकेन्डको हेर्नै नसकिने लाईभ भि’डियो बाहिरियो (हेर्नुहोस भिडियो)
वर्षकी छोरीलाई आफ्नै बाबुले कर’णी गरेको छिमेकीले देखेपछि …..